Gịnị bụ ihe kasị mma touring bike? - Bikes
Isi > Bikes > Gba ịnyịnya ígwè kachasị mma - ngwọta dị irè
Gba ịnyịnya ígwè kachasị mma - ngwọta dị irè
Gịnị bụ ihe kasị mma touring bike?
Kachasị mma njegharị2021
Njem Ridgeback. TAAKachasị mmaEGO.
Trek 520 diskiịgagharị igwe kwụ otu ebe. TAAKachasị mmaEGO.
Cube Travel Pro trapezeịgagharị igwe kwụ otu ebe. TAAKachasị mmaEGO.
Kona Echi niileịgagharị igwe kwụ otu ebe. TAAKachasị mmaEGO.
Salsa Marrakesh BrooksTouring igwe kwụ otu ebe. TAAKachasị mmaEGO.
Usoro nyocha nke nchekwa maka ọtụtụ njegharị na ngwongwo ngwongwo na-adịkarị ihe dị ka onye na-agba 130 na ihe nkedo, mana ule nchekwa a na-eweta ala, ọ bụghị ụlọ. Ọ bụ ezie na a na-edebe igwe kwụ otu ebe na obere, a na-ahazi igwe kwụ otu ebe maka oke ibu - ọbụlagodi na onye nrụpụta ekwupụtaghị ya ebe ọ bụla. Agbanyeghị, n'oge na-adịghị anya, anyị ga-ahụ ịnyagharị igwegharị na-akpọsa ọkwa kachasị elu dị ka ụlọ ọrụ nyocha igwe kwụ otu ebe na-enye asambodo ruo 180 n'arọ.
Ọ bụrụ na akụrụngwa akụrụngwa kpamkpam, etiti ahụ ga-ekwesi ike. Number abụọ: Bikepacking igwe kwụ otu ebe na-enwekarị a ala etiti isi. Uwe siri ike na-ejikọkarị ya na igwe kwụ otu ebe.
Ejiri m ibi ndụ dị ka okirikiri nke nwere ihu ọhụụ mana ọ pere mpe. Iji bulie ịdị ndụ nke igwe kwụ otu ebe, a ghaghị iburu ụzọ onye na-agba ịnyịnya, arụmọrụ ya na ibu ya n'uche. Ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume na-ewu a nippy igwe kwụ otu ebe bụ siri ike iji na-ebu a arọ n'ihu na azụ ibu.
Agbanyeghị, ịnwere ike iji ọkụ wuru ọkụ ma buru ibu n'otu isi, ma ọ bụ ịnwere ike ibufe gia gị na ụgbọala na-adọkpụ kama. Iberi igwe ịnyịnya ibu nwekwara ike ịdị arọ nke ukwuu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere zụrụ nri na galọn mmiri iri so gị otu izu. Mgbe ị na-agba n'ụzọ dị otú a, ịchọrọ ijide n'aka na igwe eji agba ịnyịnya ígwè gị siri ike dị ka igwe kwụ otu ebe.
Number atọ: Bikepacking igwe kwụ otu ebe nwere dị iche iche mounts. The mounts na-adịkarị iche n'etiti touring na backpacking anyịnya igwe, ma edoghi na-mara blurry ụbọchị ndị a. Togba ígwè na-agagharị agagharị na-enwe mkpọmkpọ ebe na mudguard mgbe ọ bụla, ebe ịnyịnya ígwè na-enwekarị ha mgbe ụfọdụ.
Nọmba nke ise: A na-echekarị igwe kwụ otu ebe maka ụzọ n'okporo ụzọ. Nlele ngwa ngwa site na edemede di na Bikepacking Bike Buyer's Guide na ọ bịara doo anya na e wuru igwe ndị a karịa maka ụzọ dịpụrụ adịpụ. Ana m ekewapụta igwe kwụ otu ebe na-adabere na nkọwapụta wiilị n'ihi na nke a bụ isi ihe dị n'ịchọpụta arụmọrụ igwe kwụ otu ebe n'okporo ụzọ.
Agbanyeghị, enwere ike ịme igwe anyịnya igwe puru iche maka ụzọ - ọtụtụ igwe elekere gravel na akwụkwọ m bụ naanị igwe kwụ n'okporo ụzọ, nke mere ha nhọrọ kachasị ọsọ maka njem dị mfe. N'iji ya tụnyere, a na-eme njem nlegharị anya igwegharịrị na mbara ala dị iche iche, nke mere na ụdị njikwa na-abụkarị ebe kachasị mma maka ịhọrọ igwegharị njem. E nwere ọtụtụ overlap n'etiti anyịnya igwe! A na-egosikarị igwe kwụ otu ebe dị egwu n'okporo ụzọ m abụọ, ma mgbe anyịnya igwe gravel nwere ugwu maka ihe mkpuchi na ihe mgbochi, enwere ike ịchọta ha na ngalaba 'njegharị' nke akwụkwọ m na-agagharị.
salsa cutthroat nyochaa
Na ọtụtụ nke bikepacking bike ige m akwụkwọ, 1X drivetrain bụ maa ndị kasị ewu ewu na nhọrọ! Ihe ndi a puru iche bu uzo ndi gravel 700c, nke a na-aruzi dika ihe eji anya ugbo ala - na, oddly zuru ezu, igwe kwụ otu-ụzọ 29-inch. Xgbọ okporo ígwè 1X na-enye mwepụ taya karịa na ụzọ dị mkpirikpi ka e jiri ya tụnyere usoro mbido derailleur. Ọ bụ ezie na ha nwere nnukwu jia elu n'etiti gia, ịkwesighi ịme mgbanwe ọ bụla dị mma na mbara ala dị ka ị ga-eme n'okporo ụzọ.
Otú ọ dị, akụkụ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya dị ka ihe mgbagwoju anya na ihe mgbochi hydraulic egosiwo na a ga-atụkwasị obi na afọ ndị na-adịbeghị anya na igwe kwụ otu ebe maka ọtụtụ afọ na-esote. Yabụ enwere ike ịmebe igwe kwụ otu ebe maka ịgba ịnyịnya na ịgagharị? Kpamkpam. Co-op Cycles ADV 4.2 bụ ezigbo ihe atụ.
Igwe igwe kwụ otu ebe na - eji ihe eji eme ihe emebere ka ọ dị mfe. Ọ nwere oke ala gia oke, dị oke-ụzọ ma nwee ndokwa maka ịgagharị mkpọ na mudguards ma ọ bụ akpa akpa akpa. Ọrụ ọrụ ahụ siri ike ma nwee ike ịkọ site na ịdị arọ ya na kilogram 16.
Geometry okirikiri na-abịarukwu nso na igwe eji agagharị agagharị na ogologo ọdụdụ na aka ndị kwụ ọtọ. Nwere ike idozi igwe kwụ otu ebe na ndị na-eme njem maka ogologo njem ma ọ bụ nke ọzọ dị ka ntọala na-agba ọsọ na ngwa ngwa. Kedu igwe kwụ otu ebe ka ị kwesịrị ịga? Aghaghị m ikwugharị - ị nwere ike iji igwe kwụ otu ebe maka ịgagharị na ngwugwu! Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwalite ntọala gị, ikwesiri iburu ibu gị n'uche, ala a ga-ebugharị, nkpoda nke mbara ala ahụ, nhazi akpa achọrọ yana ma ị nwere akụkụ mapụtara ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị.
Gịnị bụ ihe kasị mma touring bike maka ego?
Ihekacha mma njegharị anyịnya igwemaka ịgba ọsọ, ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ njem
JenesisNjegharịDe Fer 10. Angagharịnjikere ụzọigwe kwụ otu ebekwụ ọtọ n'ụlọ ahịa ahụ.
Mee 920. Thekacha mma touring igwe kwụ otu ebemaka ịgba ọsọ n'okporo ụzọ.
Surly Disc Trucker. Nchara ahụ dị ọchaịgagharị igwe kwụ otu ebe.
Nnukwu Toughroad SLR 1.
Oge opupu ihe ubi dị nso n'akụkụ, ọtụtụ n'ime gị nwere ike ịnọ na-eche maka ịzụrụ igwe kwụ otu ebe mbụ gị nọrọ ruo mgbe ngwụsị nke isiokwu a, ị ga-enweta ọtụtụ ndụmọdụ dị ukwuu tupu ịzụrụ. njegharị, Bikepacking ma ọ bụ naanị n'èzí n'èzí n'ozuzu, biko tụlee ndenye aha. Ọwa a na-emelite ọ dịkarịa ala otu ugboro n'izu na ihe ọhụrụ dị ka isiokwu njem igwe kwụ otu ebe, ihe ngosi-isiokwu ma ọ bụ nyocha ngwaahịa bụ igwegharị m.
Nke a bụ Kona Sutra, mana ihe niile m na-agabiga n’isiokwu a bụ ezigbo izugbe maka igwegharị njem niile. Ka anyị malite site na ile anya na okpokolo agba Eku anyị na-agagharị agagharị nwere geometry dị jụụ karịa igwe kwụ otu ebe gị, otu ị ga - esi hụ sadulu na aka ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, yabụ ị ga - enweta ọnọdụ izu ike. Igwe elu dị ebe a na-aga ntakịrị na njikwa aka ebe a.
Ọ bụ kehoraizin dị ka ị pụrụ ịhụ na ọtụtụ ọduọ anyịnya igwe, iji nwee ike zuru ike ịnya ịnyịnya ọnọdụ m na-etinye a spacer n'ihu ka m bulie m handlebars banyere otu anụ ọhịa, touring anyịnya igwe na-abịa na ọtụtụ dị iche iche nha na ụdị, ma ọ bụrụ na ị na- ejighi n'aka Iji chọpụta nke ruru gị aka, naanị gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke ndị nrụpụta. Ha na-enwekarị eserese dị ukwuu ebe ahụ ka ị nwee ike banye nha gị ma ị nwere ike ịnwe igwe kwụ otu ebe maka gị? Ihe dị iche n’etiti igwe kwụ otu ebe na njem ịgba ọsọ bụ na ọtụtụ igwe eji agagharị igwe eji eme igwe bụ igwe karịa carbon ma ọ bụ aluminom. Enwere ụfọdụ nke aluminom, agbanyeghị, m ga - ekwu na ikekwe 95% nke igwe kwụ otu ebe niile bụ nchara.
Uzo abuo abuo nke igwe nchara bu na o di nma karie igwe eletriki aluminom ma o di nfe karie imezi ya mgbe ịnọ n'otu onodu ebe ichoro ime ya na igwe igwe, i nwere ike igha na igwe. nwere okpokolo agba a na-agbanye igwe kwụ otu ebe, otu ọghọm nke igwe igwe igwe bụ na ọ dị ntakịrị karịa aluminom ma ọ bụ carbon carbon. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ị ga-ebu ọtụtụ ibu na akpa gị, ịdị arọ nke igwe kwụ otu ebe adịghị mkpa. Akụkụ ọzọ nke igwe kwụ otu ebe bụ na ị nwere ogologo ogologo ịnọdụ ala ebe a, nke pụtara na azụ ikiri ụkwụ gị anaghị emetụ akpa ahụ mgbe ị na-aga ụkwụ na ụkwụ igwe kwụ otu ebe a dị n'etiti pedal na akpa ga-adị nso karịa nke a. ịgagharị ebe a Na igwe kwụ otu ebe a enwere m ihe mkpuchi atọ maka ngịga karama, enwekwara m anya mmiri ebe a maka braket abụọ ọzọ Ma ugbu a, m na-eji eyelet ndị a maka akpa akpa m, ebe m tinyere akpa m Dịka ị pụrụ ịhụ, igwe kwụ otu ebe m nwere n'ibu diski brekị, ndị a na-aghọwanye ndị nkịtị on touring anyịnya igwe, Otú ọ dị, a ka nwere ọtụtụ anyịnya igwe na rim brek na ndị a na-emekarị na-arụ ọrụ dị ka nke ọma dị ka diski brek.
The uru nke diski brek bụ na ha na-arụ ọrụ nke ọma ọbụna na mmiri ozuzo. The downside nke diski brek bụ na mgbe ị na-ejegharị ejegharị na-emepe emepe na mba ọ pụrụ ịbụ obere ihe siri ike iji nweta nnọchi akụkụ nke diski gị brek. E nwere ole na ole dị iche iche aka maka njegharị anyịnya igwe M nwere a dropbar ebe a.
Fọdụ ndị mmadụ na-ejikwa aka ha na-ejizi eme ihe. ahurum ndi mmadu ka ha na-etinyekwa ihe nru ububa. The uru nke dobe akụkụ ma ọ bụ urukurubụba Ogwe bụ na ị nwere ike ịgbanwe ọnọdụ nke aka gị mgbe ị na-agba ịnyịnya, na nke ahụ bụ ezigbo mkpa n'ihi na ọ bụrụ na ị na-aga na-aga na a igwe kwụ otu ebe njem maka otu izu ma ọ bụ abụọ.
Ọ bụrụ na ejiri ya n'otu aka ahụ oge niile, ikekwe ị ga-enweta ọtụtụ nsị na nkwonkwo na aka m Ntuziaka m ga - abụ maka ịga dobe mmanya ma ọ bụ ụlọ mmanya urukurubụba Ihe aka nke igwe kwụ otu ebe na - adịkarị obere karịa gị igwe kwụ otu ebe ka ị nwee ike inweta nke gị Tinye akpa aka aka ebe a n'ezie ọfụma Nke a na - eji ndị na - emegharị ihe na - agagharị agagharị mana enwerekwa igwe kwụ otu ebe na STI na - agbagharị ebe ị nwere breeki jikọtara ma na - agbanwe ebe a. hifters take some getting used to Ichere izu ole na ole ma ọ bụrụ na ọ dị mfe dịka o kwesịrị nkịtị Uru nke ndị na-agbanwe mmanya mmanya a bụ na ha dị mfe idoziMgbe ndị m nọ n'ụgbọala a bụ otu Shimano Deore dị iche iche, nke bụ n'ezie ugwu Nke a bụ Shimano Deore dị iche iche dị iche iche dị iche iche maka m d enke, ị ga-agarịrị ma ọ dịkarịa ala maka otu ìgwè dị n'etiti, ma eleghị anya ọ bụghị? dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na ịnwee igwe kwụ otu ebe a maka afọ 10 ma ọ bụ afọ ole na ole, igwe m na-agagharị agagharị na-abịa ebe a yana ijiri okpukpu atọ n'ihu nke dị ezigbo mma mgbe ị na-agbago ugwu dị larịị na igwe eji agagharị agagharị nke ịchọrọ ị nweta ọtụtụ gia ịhọrọ site na igwe eji agagharị agagharị anyị na-agagharị agagharị dịkwa ezigbo mkpa ịnwe ụkwụ siri ike ma kwụsie ike Nke a mejupụtara 36 spokes The taya m na-eji bụ Schwalbe Marathon ntụgharị oke oke mgbapu nguzogide N'ihi ya, i nwere ike ị nwere ike ịgagharị ya maka afọ ole na ole. tupu ị na-enwe mbụ gị taya ewepụghị ọzọ A mma atụmatụ bụ nke a na-atụgharị uche na teepu n'akụkụ nke taya, nke na-eme ka ị na ihe anya na okporo ụzọ. Marathons Schwalbe nke m na-eji ebe a bu 42 milimita n'obosara ndụmọdụ m maka igwegharị njegharị ga-abụ opekata mpe taya 35 ma ọ bụ 37 millimita, iji nagide oke ibu ya na Inwe ike iguzogide akụrụngwa ị butere. gaa a mma onye itinye ego anụ akpa m nwere ya ọzọ ebe a na e nwere ndị abụọ na ọkwa dị ka ị pụrụ ịhụ ebe a na m na-eji ala otu jide m azụ n'akpa uwe na elu otu na-anọgide nke mere na m nwere ike melite m tripod ebe a ọzọ obere n'akpa uwe ma ọ bụrụ na m chọrọ Ọ bụrụ na ị na-emebu ya Na n'okporo ámá gị na-agba ịnyịnya ígwè, ị nwere ike ghara iji fend. Ma mgbe ahụ ị nwere ike ịhọrọ anwụ anwụ ga-apụ.
Ma ọ bụrụ na ị na-na na tour maka a izu ma ọ bụ abụọ, Ohere inweta bụ na ị na-aga na-enweta a mmiri na-ezo ụbọchị ma ọ bụ abụọ n'oge ndị a niile gia na uwe n'ezie ruru unyi. Ntụnye m ga-abụ ịzụta ọmarịcha mudguards maka igwe njegharị gị. A naghị etinyekarị pedal na ịzụta igwe kwụ otu ebe.
Ya mere, ọ dị ha mkpa ịgbakwunye n'onwe gị, m na-eji ngwakọta ngwakọta onwe m ebe otu akụkụ bụ SPD pedal na akụkụ nke ọzọ bụ pedal dị larịị More sadulu dị ọnụ ala Enwere ọtụtụ ọdụdụ dị ọnụ ala karịa ebe ahụ m ga-akwado iwepụta oge iji nwalee ụfọdụ dị iche saddles nwere ike ịga leta ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị, ọ ga-abụ na ha ga - enyere gị aka ịchọta ezigbo ịnyịnya maka gị nke ọma na-achịkọta ebe m na-agagharị, ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla biko hapụ ha na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a. gbalịa ịghachite ha n'oge na-adịghị anya dịka o kwere mee Dịka m kwuru na mbido isiokwu ahụ, biko denye aha na ọwa m Ruo oge ọzọ ezigbo
Gịnị bụ ihe ndị kasị ala touring bike?
Yabụ na n'uche nke a, ndị a bụ (n'echiche m)kasị ala touring ọgba tum tumdị maka ogologo ogengagharịtaa.
Honda Gold nku.
Indian Chieftain Ọchịchịrị Ọchịchịrị.
Mmeri Tiger 900 GT Pro.
Ndị mmadụ na-ajụkarị ajụjụ maka ya na netwọkụ mmekọrịta na ngalaba nkọwa, Kedu onye ọkwọ ụgbọ ala kwesịrị ịhọrọ ndị njem nleta Taa, anyị ga-ekwu maka njikwa aka, otu ha si emetụta ọnọdụ igwe kwụ otu ebe gị, na nke njikwa ị ga-atụle. Anyị na-atụnyere aka ahụ site n'ịrịgo ya na otu igwe ịnyịnya ígwè a ma ama - Trek 520, igwe kwụ otu ebe a bụ ihe atụ nke igwe kwụ otu ebe na-agagharị kemgbe ọtụtụ oge Ezubere n'okporo ụzọ awara awara, yabụ Trek nwere ntụpọ ntụpọ nkịtị. otu ihe ị pụrụ ịhụ n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe.
Ọ bụ otu obosara na hoods na tụlee. Ogwe aka a nwere ọtụtụ ọnọdụ aka Younwere ike itinye aka gị n'akụkụ nkuku, nke na-agbanwe ọnọdụ gị n'ụzọ dị mfe. I nwekwara ike iji ogwe dị n'elu iji nweta ọnọdụ kachasị izu ike.
Gịnị bụ ihe dị iche na njegharị na nkịtị dobe mmanya? Ihe mbụ ị ga - ahụ bụ obosara, nke dị iche na Ogwe ntụpọ okporo ụzọ Ordin, ebe ị nwere ike ịhụ na ọ sara mbara. Wide tụlee na-enye nkasi obi kachasị ma na-achịkwa n'okporo ụzọ, n'ihi ya, ọ na-echetara otu obosara MTB. Ihe nke abuo metụtara aka ala bu ihe a maara dika ‘drop’.
Nke ahụ pụtara otu omimi ị ga-esi miri ala n'ọnọdụ aka gị, Ogwe ntụpọ okporo ụzọ nwere nnukwu ọdịda n'ihi na onye na-eme egwuregwu ga-alụ ọgụ megide ifufe ma nwee ọnọdụ ikuku kachasị mma. Ihe ndị a niile abụghị ihe kacha mkpa maka ndị njem nleta. Nke a bụ ihe kpatara ịgagharị ndị na-agagharị agagharị anaghị enwekarị mmasi na ntụsara ahụ dị nro.Ha dị omimi iji gbanwee ọnọdụ gị ma tufuo mmetụta na-adịghị mma nke ogologo njem dị n'otu ọnọdụ dị n'etiti etiti njikwa na mkpuchi ahụ Togagharị ndị njem na-enwekarị mkpumkpu, nke kwesiri ime ka onodu ịnya gi di elu Ka anyi tulee nke n'ime ihe ndi a ichoro maka uzo gi, ka anyi bido na onye na-emezi ihe, ejiri m ihe a ihe dika ọkara afọ na SURLY Disc Trucker, i nwere ike ichota isiokwu banyere ihe mmanya a na ọwa m na igwe kwụ otu ebe a ị na-agba 80/20 ma ọ bụ 70/30 - okporo ụzọ / OffroadY ga - achọpụta na ogwe aka a dị mma nke ukwuu, o nwere ọnya na - acha ọkụ ọkụ ma ha nwekwara ntakịrị ntakịrị ka ọ tụlee Maka ịkwọ ụgbọala n'okporo ụzọ Mana m na-ahọrọ Woodchipper, m na-eji ihe nlere a maka oge zuru oke a Surly ECR 29er, ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya 70/30 ma ọ bụ 60/40 na / anya n'okporo ụzọ nke a bụ akara aka kachasị mma maka gị Adịla obi erughị ala e n'oge ogologo njem.
Isi ihe ọzọ m masịrị m bụ akụkụ ala nke tụlee ahụ, nke pụtara na ị nwere ike ịhọrọ etu miri ị chọrọ ka mmiri si ada n'akụkụ, itinye aka gị n'akụkụ nkuku ahụ na-enye gị ọdịda na-emighị emi mgbe hold jidere aka gị na ogwe ndị ahụ ọgwụgwụ ị ga-amaba miri n'ime m nọkwasịworo a mmanya na n'usoro, abụọ tracks, raw pụrụ n'ụzọ na ọbụna na snow na m hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Long akụkọ mkpụmkpụ - ndị ọzọ anya-ụzọ njem ị na-eme, na wider njali elu na angled tụlee m ga-atụ aro iji, ma ya bụ ihe kasị mma! Ọfọn ndị kasị mma nke kasị mma, ọ dịghị onye mepụtakwara ihe ọ bụla ka mma) Ọfọn, anyị nwere ogologo okwu banyere dropbars, ka anyị kwuo banyere ndị ọzọ nwere otu mma; ma eleghi anya nwere ike rụọ ọrụ karịa, Ogwe ndị a bụ: Surly Moloko na Jones Loop Bar M ga-egosi gị nkenke ọnọdụ ịkwọ ụgbọala na anyị ga-enwe obere okwu gbasara esemokwu.
You nwere ike ịchọta ule nyocha zuru ezu na channelụ BIGTOYSSurly Molokois bụ akara aka na-agagharị agagharị maka ndị na-enweghị mmasị Ọ bụ otu n'ime aka njikwa kachasị mma m nwetụrụla ma ọ nwere ike dochie mkpado na 80% nke ikpe. Ma Moloko na-ebute ụzọ mgbe ị na-anya ụgbọ ala n'ihi na ọ nwere ọnọdụ aka sara mbara yana n'ihi na esi na nchara Cro-Mo mee ya, nke pụtara na ọ na-amata ịma jijiji niile n'okporo ụzọ. Nwekwara ike ịchọta nyocha zuru ezu banyere ogwe aka a na 'Surly ECR Review', na nke ikpeazụ maka taa bụ Jones Loop Bar, Ikekwe otu n'ime ihe ndị a ma ama ị nwere ike ịhụ na igwegharị anya na-agagharị agagharị, nke a bụ otu n'ime ndị kasị ergonomic na ala touring handlebars, o nwere ibu ala aka ọnọdụ na o nwere ọzọ atụmatụ dị ka a Surly MolokoJones nwere ya e ji mara jiometrị nke bụ pointer ọnọdụ n'akuku nke dị iche na Moloko na a akpan akpan nlereanya nwere a dị iche iche mkpanaka elu. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ izu ike karịa na ịnya ịnyịnya gị, ị kwesịrị ịtụle itinye ihe njikwa ndị a n'ọnọdụ osisi.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọghị ọnọdụ ịnya ụgbọ ala mara mma nke ukwuu, ịnwere ike iji ụdị ọkọlọtọ na-enweghị nnukwu ọrịrị na-agagharị agagharị biko biko kọọrọ ndị enyi gị isiokwu a Pịa aka isi aka ma ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị. Tụlee ịdenye aha na ọwa ahụ ma kụọ obere mgbịrịgba ahụ iji nweta ọkwa ọhụụ ọhụụ niile, daalụ maka ikiri, lee gị mgbe emechara! Dropbars Cheers!
Ibu na-abụkarị ihe mkparịta ụka ọ bụla banyere igwe kwụ otu ebe, ihe ndị mejupụtara ya, na ihe ndị na-ama ụlọikwuu. Will ga-achọpụtala na anaghị m ekwusi ike nke ukwuu na ọwa a, nke ahụ bụ n'ihi na ọ dị obere karịa ka ị chere. Ekwela ka m mehie, enwere ụfọdụ ezigbo ihe iji jiri gia ọkụ.
Anyị ga-atụle ha niile n'isiokwu a. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-anwa ịhapụ ibu gị ka ọ ọsọ ọsọ ọsọ, ọ ga-abụrịrị na ị na-ebuso osisi na-ezighi ezi. Taa, anyị na-amụta oge ntaramahụhụ maka kilogram ọ bụla ị gbakwunye na igwe kwụ otu ebe gị ma ọ bụ akụrụngwa gị.
Anyị na-atụle ntaramahụhụ oge a na ụdị ọgụ mgbochi ndị ọzọ. Ka anyị bido site n’itinye ịdị arọ ya. Mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè gị n’elu ugwu, ọ bụghị naanị ibu igwe ka a na-ebu.
Ha na-akwagidekwa ahụ gị, uwe gị, akpụkpọ ụkwụ gị, mmiri gị, nri gị, pọmpụ gị, tubụ mapụtara gị, na akpa ọ bụla ị pụrụ iburu. Ibu ahu gi bu isi akuku ibu a. ọ na-abụkarị karịa 80% nke ngụkọta.
Otu igwe kwụ otu ebe nke dị 10% ọkụ karịa nke ọzọ nwere ike ịdị gị ezigbo mma mgbe ị buliri ya, mana ọ na - ebelata naanị ibu gị site na 1%, nke na - ada ụda karịa ugbu a. Vingchekwa gram n’ịnyịnya ígwè na akụrụngwa bụkwa ihe na-efu ego dị ukwuu. Otu kilogram nwere ike ịpụta ihe dị iche n ’ụlọ ntu dị $ 200 na ebe obibi $ 600, okpokoro nchara $ 600 na mkpụrụ titanium $ 1,600, ma ọ bụ igwe eji ajị anụ $ 3,100 na igwe elekere $ 6,200.
Mee igwe kwụ otu ebe. Na mgbakwunye, ngwaahịa ọkụ anaghị adịte aka oge ụfọdụ. Achọpụtara m nke a karịsịa na zipa, akwa mmiri, cassettes aluminom (na akụkụ ahụ), taya na rim.
Ọ dị mma, ka anyị chọpụta etu ibu si emetụta ọsịsọ mgbe ịgba ịnyịnya ígwè. My ụzọ na-erughị uche ibu ibu malitere mgbe m sụọ ngọngọ n'elu a website akpọ Bike mgbako nke, mgbe m banyere niile kwa, nwere ike ibu amụma m igwe kwụ otu ebe iji a mgbakọ na mwepụ nlereanya. M nwalere ya dabere na mmepụta ike m, ibu ahụ, ibu igwe kwụ otu ebe na akụrụngwa.
Emechara m mee profaịlụ ọkwọ ụgbọ mmiri dị kilomita 100 nke gara kilomita ise na ugwu wee jiri kilomita ise gbadata - ugboro 10 - nke ọ bụla nwere grajentị 3.6%. Ngụkọta dị iche na ịdị elu dị gburugburu mita 1800.
Enwetara m amụma oge maka ibu ibu anọ dị iche iche ka m nwee ike ịgbakọ oge kwa kilogram ọzọ na usoro m. Ọ bịara bụrụ na kilogram kwesịrị ịgbakwunye n'etiti 76 na 80 sekọnd na 100 kilomita. .
Ọbụlagodi na m belatara ike m site na 30% ma ọ bụ dozie akụkụ ya na obere onye na-agba ịnyịnya na obere ike, kilogram ka dị naanị nkeji abụọ. Tụle ụzọ m nwere ntakịrị ịrị, otu minit ma ọ bụ abụọ mgbe elekere anọ na ise gachara nke dị obere karịa ka m tụrụ anya ya. N'ihi ya, ekpebiri m ime nnwale nke m.
Egburu m igwe kwụ otu ebe, bụ nke a kwadebere na mita ike na nnukwu panniers, ụzọ 15.4 kilomita na elu nke 265 mita. Ejiri m na 200 watts - mmepụta nke m maara na m nwere ike ijide ụbọchị ule.
E chebere ụzọ ahụ nke ọma, nke belata ihe mgbochi ikuku. Emepụtara ya iji dayomie ụbọchị igwe kwụ otu ebe na ugwu, na-ekpuchi gburugburu 1,800 mita nke elu karịa 100 km. Emere m ule abụọ na-ebu ibu dị iche iche atọ.
Nke a bụ nsonaazụ m: Mgbe m gachara ihe dị ka nkeji iri anọ, ahụrụ m ihe dị iche na nkeji abụọ ruo atọ n'otu ụkwụ ka m na-etinye n'ibu ahụ. Ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ ndị a bụ ntakịrị nkịtị, ka anyị kọwaa ha na 100 km iji hụ etu ha si kwekọọ amụma igwe kwụ otu ebe nke 78 sekọnd kwa kilogram ọzọ. Oge mmezi ahụ karịrị naanị nkeji, na-atụ aro na nghọta m banyere etu ibu si emetụta ọsọ igwe bụ ntakịrị ihe.
Igwe ihe igwe kwụ otu ebe dị naanị n ’ọkara 1.5 na 4.5 nke oge ule m n’èzí, nke m chere na ọ di nnukwu mma na ịlele profaịlụ dị mfe nke m mepụtara bụ naanị ihe dị anya na uru dị elu.
Ekwenyesiri m ike na ọ bụrụ na ejiri m oge na-agbazi gradi, izi ezi ga-aga n'ihu na-akawanye mma. Emechara m nwaa ịnwale ule dị n’èzí n’okporo ụzọ dị larịị. Ọ tụgharịrị na na 200 watts enweghị m ike ịhụ ọdịiche pụtara ìhè na ọsọ ma m na-ebu 5 n'arọ ma ọ bụ 25 n'arọ.
Enwere m mgbagwoju anya, abanye m na nhazi m na igwe ihe igwe kwụ otu ebe na ọ buru amụma na m ga-abụ 10 sekọnd nwayọ maka kilogram ọ bụla karịrị 100 kilomita. Echere m na ọ na - akọwa ihe kpatara ọsọ m yiri - oke adịghị mkpa n’ụlọ ahụ. Ọ dị mma, ya mere data data na mgbakọ na mwepụ na-egosi na paụnd nwere ike ime ka ị ghara belata.
Mana enwere ole na ole ebe m chere na ọ bụ ihe akwadoro ilekwasị anya na igwe kwụ otu ebe na gia. Number otu: ị na-agba ọsọ. Ihe dị iche n'agbata mmeri na ọnwụ bụ mgbe ụfọdụ ka a tụrụ na millimeters.
Otu kilogram na-erughị aka na-enyere aka ebe a, yana uru nke ịchekwa ibu a na-abawanye ogologo na ugwu ugwu agbụrụ gị. Nọmba abụọ: iji melite njikwa na mmetụta nke igwe kwụ otu ebe. Arọ igwe kwụ otu ebe adịghị enwe mmetụta dị ka ọnya ma ọ bụ mmeghachi omume mgbe ọ na-aga ngwa ngwa ma ọ bụ na-agbagharị, nke na-eme ịnya ịnyịnya ntakịrị.
Ha dịkwa oke arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị jiri akpa gị niile bofee ha. Nọmba 3:. Ọ bụrụ na ị hụla edemede m na-akọwa ọdịiche dị n'etiti ịkwakọba igwe kwụ otu ebe na ịgagharị igwegharị, ị ga-amata na igwe kwụ otu ebe na-adọkpụ ma wuo ya na ọtụtụ ihe mejupụtara n'ụzọ pụrụ iche maka akpa dị arọ.
Mana nke a bụ nkwekọrịta ahụ: idebe ịdị arọ nke akpa gị pere mpe pụtara na ị nwere ike ịga njem na ntụkwasị obi n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe kwụ otu ebe - ọ bụghị naanị igwe kwụ otu ebe. Number anọ: maka mfe bulie nke igwe kwụ otu ebe. Enwere ọtụtụ oge ị ga-ebu ịnyịnya ígwè gị.
Dịka ọmụmaatụ, m na-ejikarị ịnyịnya ígwè m arịgoro n'okporo ụzọ ụkwụ na n'okporo ụzọ ịnyịnya yana steepụ n'ime ụlọ, ụlọ nkwari akụ na ọdụ ụgbọ oloko. Na nọmba ise: iji mee ka ofufe dị ọnụ ala. Fewfọdụ kilogram ndị ọzọ nwere ike ịgbakwunye na ọdụ ụgbọ elu.
Gbaa mbọ hụ na igwe kwụ otu ebe gị zuru oke ka nke ahụ ghara ijide gị site na ụgwọ isi. Ka anyị bịakwute ihe ndị dị mkpa karịa ibu karịa ọsọ ọsọ ọsọ. Igwe igwe na-ebu amụma na pound ise ọzọ ga-apụta 2.5% karịa oge na 100 kilomita m, profaịlụ na-agba ugwu, na naanị 0.4% karịa oge na profaịlụ dị larịị.
Anyị nwere ike iji oge ndị a tụnyere ụzọ abụọ ndị ọzọ dị iche iche na-agba ịnyịnya ígwè: nkwụsi ike na imegharị ikuku. Ọ bụrụ na m tinye ụfọdụ nke na-adịghị nwayọ na-agagharị taya na igwe m karịa nke ndị na-agagharị ngwa ngwa, ụzọ m dị elu ga-ewe 12% karịa n'okwu a. Ngbagide ịgbagharị ahụ fọrọ nke nta ka ọ dị okpukpu ise karịa ịtinye 5kg na igwe kwụ otu ebe m, ọ dịkwa okpukpu iri na asaa dị mkpa na profaịlụ dị ala! Agbanyeghị, ọnụọgụgụ ndị a buru ibu buru ibu maka na m na-atụle taya kachasị ọsọ na ụfọdụ nke nwayọ nwayọ.
Mana ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị atụlee taya dị nso na etiti ndepụta a, nguzogide ịtụghasị ka bukwara oke karịa 5kg nke ibu ibu. M ga-ejikọ isiokwu m na-agba ume na CyclingAbout n'okpuru. N’ime ule m na-eme na mbara igwe, achọpụtara m na ọ were oge 6.4 na 7.9% gbakwunyere oge iji kpuchie 100 km mgbe ị na-eji panniers eme ihe.
Nke a pụtara na ịgbanwee akpa na njem dị larịị nwere ike ịbụ ihe dị ka ugboro iri na isii ruo iri abụọ karịa ịtinye 5kg nke ngwongwo mnya igwe. Nwere ike ịhụ ndepụta m nke nchekwa ụgbọ elu maka ndị njem igwe kwụ otu ebe na edemede a dị n'elu. Na mmechi, data ahụ doro anya na ịdị arọ nke igwe kwụ otu ebe adịghị mkpa dịka ị chere na ọ dị. ? Ule m na-anwale, yana nọmba sitere na ụdị mgbakọ na mwepụ, na-egosi na kilogram nke ibu ọzọ na njem igwe kwụ otu ebe 100km nwere ike ịgbakwunye otu nkeji ma ọ bụ abụọ.
Na ihe dị larịị, kilogram nwere ike ịbụ 10 ma ọ bụ 20 sekọnd. Chee echiche banyere ya oge ọzọ ị ga-eche banyere igwe kwụ otu ebe na igwe akụrụngwa. Ikekwe, dabere na ozi a, ị nwere ike ịchekwa $ 1,000 ma ọ bụ $ 2,000 site na ịhọrọ igwe kwụ otu ebe kama titanium.
Ma ọ bụ mgbe gị ultralight gia na-akaghị nká, ị nwere ike dochie ya na ihe ọzọ inogide. Nwedịrị ike iburu akwa ụra na-ehi ụra, nke dị mma karị ma hie ụra abalị nke ọma. Ọ bụrụ n’ị na-enwe afọ ojuju igwe kwụ otu ebe, biko tụlee ịkwado ọwa a na Patreon, ma ọ bụ nke ọzọ, jidere otu n’ime akwụkwọ m! A na-emelite Ntugharị Ntugharị na Bikepacking Bike na-akwụ ụgwọ kwa afọ n'efu ma gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere igwe kwụ otu ebe tupu ị nwee ike ịtụle igwe kwụ otu ebe 220 na njedebe nke akwụkwọ ahụ.
Kedu otu m ga-esi ahọrọ igwe njegharị?
Mgbe ị na-atụle wiil makaịgagharị igwe kwụ otu ebe, anya: Number nke spokes: Na ndị niile na ibu ị na-hauling gịịgagharị igwe kwụ otu ebe, Ọ dị mma iche banyere ike nke wiil. More spokes a pụtara ike wiil, otú a mma n'ozuzu nkwanye bụhọrọwiil ndị nwere ma ọ dịkarịa ala 32 ọnụ.
Eeh. Dị ọnụ ala karịaanyịnya igweanaghị enwekarị ike ịnọ ogologo oge. Agbanyeghị, ahụrụ m ọtụtụ mmadụ nwere otu $ 99igwe kwụ otu ebena ụgbọala ha maka afọ 10, 20. Nke a bụ akụkụ nke nlekọta oge na-arụ ọrụ nke ọma, ha emebeghịkwa nke ahụ nke ukwuu.
Ndi igwe kwụ otu ebe dị ọnụ ahịa ego ahụ?
BụTrek ruru ego ahụ? Ee,Trek anyịnya igwedịuru ego ahụ.Mee njemngwugwu teknụzụ dị elu na nke haanyịnya igwe, ewu haanyịnya igwegburugburu akwa aluminom na okpokoro agba, ma jiri naanị ihe Shimano na SRAM nwere ntụkwasị obi.
Achọrọ m igwe eji agagharị agagharị?
.B.ịgagharị igwe kwụ otu ebenwere ọtụtụ uru karịa agbụrụ agbụrụigwe kwụ otu ebemaka otu ụbọchị ị na-arụ ọrụ n'ime ime obodo, ọ bụ ezie na ọ ga-adị nwayọ nwayọ na mbara ala na ugwu. N'ihi na EBIDO en'ezieinwe ike ịnọdụ ala ma nwee ọ thatụ na mbara ebe ị na-agbafe, kama ịnwụ na-ele anya na mkpirisi gị.06.20.2016
Ego ole ka ezigbo igwe gbara?
Anyịnya igwe anyị nwaleworoegosite n’ihe dị ka $ 300 ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 2,000. Anyị chọpụtara na ego na-azụta igbe dị fechaa nke nwere eriri carbon, aluminom (ma ọ bụ ngwakọta nke ihe abụọ ahụ), ma ọ bụ nchara siri ike na ihe ndị ọzọ dị elu. Mana ị ka nwere ike ịzụta aezigbo igwe kwụ otu ebemaka naanị narị ole na ole dollar.04.14.2016
Gịnị mere ịnyịnya ígwè Trek ji dị oke ọnụ?
Gịnị kpatara yaTrek BikesYabụOke ọnụ? Akụkụ kachasị mkpa nke aigwebụ etiti ya. Nnukwu nyocha na mmepe mmepe na-abanye n'ịrụ ndị a dị eluanyịnya igwedị ọnụ ahịa $ 10,000. Ndị na-emepụta ihe na-akpata ego ndị a dị ka ego nke na-enye ha ohere ịzụlite ogo dị eluanyịnya igweọnụ na $ 1000 $ 2000 ma ọ bụ karịa.
Nke bụ ihe kasị mma touring bike ịzụta?
520 bu igwe eji eme njem eji eme igwe maka uzo emeghe. Ọ bụ usoro kachasị ogologo na ntanetị nke Trek, ma wuo ya ka o buru gị na gia gị. Na ileba anya mbu, Trek 520 nwere ike dị ka ọnụọgụ ka ọ na-ada. Ma, ekwela ka usoro ọdịnala a duhie gị - igwe kwụ otu ebe a karịrị anya.
Kedu ihe m kwesịrị ịchọ n'ụgbọ ịnyagharị?
Emegharịrị ịnyịnya ígwè ka emepụtara iji nabata ọtụtụ racks maka akpa pannier na karama mmiri. Gaa njem dị ogologo, na-abụkarị otu abalị, bụ ebe igwe kwụ otu ebe na-eme nke ọma. Commuter / ngwakọ / ajịrịja nkume - Kedu nke kachasị mma maka ịgagharị?
Kedu ụdị wiil maka igwe eji agagharị?
Enwerekwa ugwu dị ukwuu, nke nwere ugwu maka mudguards yana ebe mmiri karama mmiri atọ na ihe ndozi ọfụma dị n'ihu na n'azụ. Wiil ndị ahụ bụ wiilị igwe kwụ otu ebe 29er dabara na Bontrager 29x2.00 taya igwe kwụ otu ebe, nke mere ya ka ọ nwee ike ịnyagharị igwe kwụ otu ebe.